०७४ सालमा सिक्वेल चलचित्रको बिगबिगी
विगततका वर्षमा भन्दा ०७४ सालमा चलचित्रको व्यावसायिक सफलताकासँगै सिक्वेल चलचित्र बनाउने बिगबिगी पनि चलेको पाइयो ।
०७४ मा प्रदर्शित चलचित्रमा छक्का पञ्जा –२, प्रेमगीत –, धुम –२ र ए मेरो हजुर –२ लगायतका सिक्वेल चलचित्र सफल रहेका छन् । र यस वर्ष प्रदर्शित धेरै चलचित्रमा सिक्वेल चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्न सफल भएका छन् । यस वर्ष प्रदर्शनमा आएका चलचित्रमा केहीले राम्रो व्यापार गर्न सफल रहे भने केही चलचित्रले सन्तोषजनक व्यापार गर्न सफल भएका छन् ।
यस वर्ष लगभग ९० चलचित्र प्रदर्शनमा आएका थिए जसमा २५ चलचित्र यस वर्ष राम्रो व्यवसाय गर्ने चलचित्र मध्यमा पर्दछन् । यस मध्येमा पनि बक्स अफिसमा पनि सम्झन योग्य १५ वटा चलचित्र दरिएका छन् । प्रदर्शित चलचित्रमध्ये केही चलचित्रले सोचेभन्दा पनि राम्रो व्यापार गर्न सफल रहे भने कुनै चलचित्रले सन्तोषजनक व्यापार गरे भने कुनै चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्ने आशा गरेविपरीत आफ्नो लगाानीसमेत उठाउन मुस्किल प¥यो ।
गत वर्षमा प्रदर्शित चलचित्रमध्ये छक्का पञ्जा २ ले अरु सबै चलचित्रलाई उछिनेर उत्कृष्ट व्यवसाय गर्न सफल भएको छ । यस्तै छक्का पञ्जा –२ सँगै घाम पानी, म यस्तो गीत गाउँछु, प्रेम गीत –२, राधे, ए मेरोहजुर–२ र धुम–२ लगायतका चलचित्रले बक्स अफिसमा राम्रो छाप पार्न सफल रहे । भने ऐश्वर्य पिँजडा, जुत्ता, मिस्टर झोले, ब्याक अगेन, २ रुपैयाँ, झ्यानाकुटी, कान्छी, तिमीसँग, शत्रुगते, नेप्टे, लिलीबिली वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा ९० चलचित्र प्रदर्शनमा आएका र यस वर्ष चलचित्र वर्ष सफलताको रेकर्ड चलचित्र छक्का पञ्जा –२ ले तोड्न सफल भएको छ ।
वर्ष ०७४ त्यसभन्दा अगाडिका वर्षका तुलनामा व्यावसायिक रुपमा सफल त रहे । तर, यस वर्ष सफ रहेका चलचित्रमा धेरै जसो सिक्वेल चलचित्र नै परेका छन् । के चलचित्र सफल बनाउन केल सिक्वेल चलचित्र नै बनाउनुपर्ने हो त ? के सिक्वेलबाहेक अरु राम्रा चलचित्र बनाउन सकेमा व्यावसायिक रुपमा सफलता हासिल नहोला र ? यसको मतलव सिक्वेल चलचित्रको विरोध गर्न खोजेको होइन कि अरु नयाँ कथावस्तुमा आधारित चलचित्र बनाउन सकेमा अवश्य पनि नयाँ पुस्ताले नयाँ सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । त्यसैले यो नयाँ ०७५ सालमा केवल सिक्वेल प्रथाभन्दा पनि नयाँ कथा वस्तु र नयाँ नाम अनि नयाँ स्वादका साथ चलचित्र निर्माण गर्न सकेमा अवश्य पनि नेपाली चलचित्रले नयाँ व्यावसायिक फड्को मार्न सफल रहने थियो ।